Plastic corrugated tubing Manufacturers & Suppliers - China Plastic Corrugated tubing Factory
Polyethylene tubing maka Nchedo USB
Ngwongwo nke tubing bụ Polyethylene. Ọ dị mfe ịwụnye na iwepụ, chekwaa oge. Ọ nwere ike na etinyere igwe akụrụngwa, eletriki akụrụngwa, electric akara kọbọd. Ogo nchebe nwere ike iru IP68, ọ nwere ike ichebe eriri USB. Njirimara nke polyethylene tubing bụ ihe na-eguzogide mmanụ, na-agbanwe agbanwe, nke na-adịghị agbanwe agbanwe, nke na-egbu maramara, nke na-enweghị halogen, phosphor na cadmium gafere RoHS.
Ngwongwo nke tubing bụ polypropylene pp.Usoro polypropylene nwere njirimara nke isi ike dị elu, nguzogide nrụgide dị arọ, nkwụsi ike na enweghị nrụrụ, ike dị elu dị elu, obere mgbanwe adịghị mma, yana mkpuchi eletriki kachasị mma na nchekwa eletriki igwe. O nweghi halogen, phosphorus, na cadmium, gafere RoHS. O nwekwara nguzogide kemịkalụ magburu onwe ya na nkwụsị nke ngwaahịa mmanụ, nke mere na usoro mgbapụta niile nwere ike nweta oke nchebe
Ngwunye naịlọn (polyamide), nke a na-akpọ PA tubing. Ọ bụ ụdị eriri sịntetik, nke nwere ezigbo anụ ahụ na kemịkalụ na ihe eji arụ ọrụ: nkwụsị abrasion, enwere ike iji ya mee ihe na ájá, iberibe ígwè; ezigbo ala, belata nguzogide, nwere ike igbochi nchara na ọnụ ọgụgụ ntinye; adụ, mfe ọ bụ curved, mfe iji wụnye na mfe hazie.
Ihe bụ polyamide. Agba bụ agba ntụ (RAL 7037), nwa (RAL9005). Ọkụ na-ere ọkụ bụ HB (UL94). ikike dị elu, ike kemịkalụ kwụsiri ike, enweghị halogen, nkwụsi ike dị elu. Ọnọdụ okpomọkụ dị min-40 ℃, max110 ℃.
Ihe bụ polyamide. Agba bụ agba ntụ (RAL 7037), nwa (RAL9005). Ọkụ na-ere ọkụ bụ HB (UL94). Ọ gaghị agbanwe ọdịdị nke ndagharị na nnukwu okpomọkụ. Mgbochi esemokwu, anụ chemical onwunwe, halogen-free, ezi ekwe ekwedo. Ọnọdụ okpomọkụ dị min-40 ℃, max115 ℃, obere oge 150 ℃.
Ire ọkụ Retardant Corrugated Polypropylene Conduit
Ngwongwo nke tubing bụ polypropylene pp.Usoro polypropylene nwere njirimara nke isi ike dị elu, nguzogide nrụgide dị arọ, nkwụsi ike na enweghị nrụrụ, ike dị elu dị elu, obere mgbanwe adịghị mma, yana mkpuchi eletriki kachasị mma na nchekwa eletriki igwe.